Iyo beta 1 yewatchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2 zvakare iri mumaoko evanogadzira | Ndinobva mac
Apple inotangisa nhasi ese beta 1 shanduro dzevagadziri veanosiyana masisitimu anoshanda uye ino nguva isu tine izvo zve watchOS 3.2.3 uye tvOS 10.2.2, pamwe neIOS 10.3.3 uye yambotaurwa beta 1 ye macOS Sierra 10.12.6 vagadziri. Mune ese aya mavhezheni e beta, akajairwa kugadzirisa bug uye kugadzirisa mashandiro akawedzerwa, asi zvinoita sekunge izvi kutanga kuti hatisi kutarisa mavhezheni ane shanduko dzakakosha mumabasa kana neimwe yakasarudzika.
Hashoma inhau idzo dzekuti idzi dzekutanga beta 1 vhezheni dzinoita sedzine mushure meshanduro dzekupedzisira dzakaburitswa nezuro masikati matisina kuona shanduko huru kana, asi kana paine chero nyaya dzakakosha mune ichangoburitswa tichaikurukura zvakananga mune imwecheteyo chinyorwa. Hapana mubvunzo kuti yekutanga beta inoshanda kuisa zvese pane ino saiti uye zvitsva zvitsva tichaona mavari mushure mekupedzisira epamutemo uko uko zvimwe zvigadziridzo zvakawedzerwa.
Apple ine maziso ayo akatarisana zvakananga pachiitiko chaJune 5, icho chinozoona zvirokwazvo shanduko hombe mushanduro dze iOS 11, macOS 10.13, tvOS 11, uye watchOS 4. Parizvino izvo zvatiinazvo shanduko diki uye zvirokwazvo mumaawa mashoma anotevera aya matsva beta vhezheni achazoburitswawo kune vashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta, kana vasingadaro masikati ano. Muchidimbu, batch rese remabheka atinotarisira kuti achagadzirisa iwo madiki zvikanganiso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » WatchOS 1 uye tvOS 3.2.3 beta 10.2.2 zvakare iri mumaoko evanogadzira
12-inch MacBook Revamps uye Zvinogona Kuchinja kuMacBook Pros yeWWDC 2017